Faahfaahin Laga Helayo Weerar Askar Burundeys Ah Lagu Laayay. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Weerar Askar Burundeys Ah Lagu Laayay.
calamada September 14, 2019 1 min read
Saraakiil ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo la hadlay Idaacada Islaamiga Andalus ayaa sheegay in weerarkaas lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo Burundi ah, kuwaas oo todobo ka mid ah meydadkooda looga cararay goobtii lagu dagaalamay.
“Annaga ayaa indhaha saarnay meydadka todobo ka mid ah ciidamada gaalada, welina waxay yaallaan halkii lagu dagaalamay” sidaas waxaa Andalus u sheegay sarkaal ka mid ah Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa sidoo kale dagaalkaas ku soo ganiimeystay hub, rasaas iyo saanad ciidan oo ay ka carareen ciidamada Burundi waxaana la sheegay inay dib ugu noqdeen xerada Gololeey ee ay markii hore ciidamadaas laga soo diray.
Previous: Dhageyso Warka Duhurnimo-15-01-1441 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 15-01-1441-Hijri.